Suuqa Kala Iibsiga Maanta: Chelsea Oo U Aragta Leroy Sane Badelka Timo Werner, Real Madrid Oo Ku Kalsoon Heshiiska Pogba, Lacazette Oo Ka Tagaya Gunners, Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaSuuqa kala iibsiga Maanta: Chelsea oo u aragta Leroy Sane Badelka Timo Werner, Real Madrid oo ku Kalsoon Heshiiska Pogba, Lacazette oo ka tagaya Gunners, iyo Qodobo kale
September 11, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Real Madrid ayaa kalsooni ku qabta inay heshiis la gaari karto xiddiga qadka dhexe ee Manchester United iyo France Paul Pogba oo 28 jir ah xagaaga soo aadan. (Mundo Deportivo)
Everton ayaa dib u soo noolaynaysa qorshaha isku daygeeda saxiixa Arsenal ee 22-sano jirka England ciyaaryahanka khadka dhexe Ainsley Maitland-Niles visha January. (ESPN)
Weeraryahanka Arsenal Alexandre Lacazette, oo 30 jir ah, ayaa laga yaabaa inuu ka tago kooxda ka dib markii ay soo baxday inay isku dayeen inay ku beddelaan Tammy Abraham oo 23 jir ah, ka hor inta uusan ka tegin Chelsea kuna biirin Roma Jose Mourinho . (Mirror)
Xiddiga garabka uga ciyaara Barcelona iyo Spain Ansu Fati ayaa loo soo bandhigay dalabyo badan oo ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Yurub, oo ay ku jirto Manchester City, waxaana wakiilka 18 jirka Jorge Mendes u soo bandhigay arintaasi. (El Nacional)
Chelsea ayaa u furan inay lasoo wareegto garabka reer Jarmal Leroy Sane, oo 25 jir ah, haddii Bayern Munich ay muujiso xiisaha ay u leedahay inay dib ugu soo celiso Jarmalka Timo Werner oo 25 jir ah. (Todo Fichajes)
Chelsea iyo Tottenham ayaa ku dagaalamaya saxiixa daafaca dambeedka midig ee Ajax iyo Netherlands Jurrien Timber, (20min)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal iyo Norway Martin Odegaard, oo 22 jir ah, ayaa sheegay in hamiga kooxda uu yahay ku guuleysiga Champions League labada xilli ciyaareed ee soo socda. (Mirror)
Tababaraha Liverpoo l Jurgen Klopp ayaa isku dayay inuu xagaagan lasoo saxiixdo weeraryahanka Leeds iyo xulka England Patrick Bamford oo 28 jir ah. (Express)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Tottenham Tanguy Ndombele ayaa doonaya inuu u dagaalamo booskiisa kooxda ka dib markii 24 jirka reer France uu codsaday inuu baxo intii uu furnaa suuqa kala iibsiga. (Standard)
Daaficii hore ee Arsenal iyo Chelsea David Luiz, oo 34 jir ah, kaasoo ah wakiil xor ah ka dib markii uu ka tagay Gunners, ayaa heshiis afka ah la gaaray inuu ku biiro Flamengo oo ka dhisan dalkiisa Brazil. (Fabrizio Romano)
Barcelona ayaa laga yaabaa inay u weecato daafaca dambeedka bidix ee kooxda Atletico Madrid ee reer Brazil Renan Lodi, oo 23-jir ah, iyadoo dooneysa inay bedesho 32-jirka daafaca uga ciyaara Spain Jordi Alba. (Todo Fichajes)
Daafaca Jarmalka Antonio Rudiger oo 28 jir ah ayaa dib u dhigaya inuu heshiis cusub u saxiixo Chelsea . Heshiiskiisa haatan ayaa dhacaya xagaaga soo socda. (Sport1)
Garabka QPR Chris Willock, oo 23 jir ah, ayaa doonaya inuu ku daydo walaalkiis ka yar, qadka dhexe ee Newcastle Joe isagoo ka ciyaaraya Premier League. (Thesun)